Ihe kpatara na anyị hụrụ n'anya na-enweghị matraasi mmiri
Karịsịa, obodo ndị kasị ukwuu n'obodo ndị kasị ukwuu n'ụwa niile na-enwe nsogbu na ụlọ dị ọcha. Nsogbu a metụtara ihe owuwe ihe osise na nsogbu mmekọrịta mmadụ na ibe ya, n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-anwụ mgbe ị na-ehicha ụlọ kwa afọ. N'ihe banyere ndụ ndụ nke ihe owuwu ma ọ bụ ụlọ, ekwesịrị ịkwụ ụgwọ maka akụkụ ahụ. Ihe owuwu nke iko nwere ike ịbụ enyi na enyi mara mma ma nwee ọrụ.
Otu ọkụ eletriki n'etiti batrị na jenerato nke na-abawanye voltaji nke moto dị n'elu batrị. Mpempe batter ka na-enye 21 kw, mana pere mpe (nke ahụ pụtara na ha na-eweta ike njupụta dị elu). Otu n'ime ihe mgbaru ọsọ nke Prius bụ ala dị ala (a tụrụ ya dị ka sluv site na Commissions Commission (